UMarilyn Monroe: Iimpawu eziziwayo nezingaqhelekanga
UMarilyn Monroe: NgoJuni 1, 1926-Agasti 5, 1962
UMarilyn Monroe wazalelwa nguNorma Jean Mortenson ngowe-1926. Wayehamba ngeenkwenkwezi ezininzi ezithandwayo, wayetshatile waza wahlukana naye u-Arthur Miller noJoe DiMaggio, waza wafa ngokugqithiseleka kwamabhajiki ngo-1962. kwiinkcubeko ezithandwayo nakwizifundo zesifazane.
Khetha iIntetho zeMarilyn Monroe
• Ndandifuna ukuphathwa njengomntu owayefumene amalungelo ambalwa ukusuka kwiintsuku zakhe zezintandane.
• Kukulungele ukufakwa kwiingcamango zabantu kodwa nawe uthanda ukuwamkelwa ngenxa yakho.
• Ndicinga ukuba xa udume bonke ububuthakathaka bugqwetha.
• Ndiyindoda enomfazi kwaye ndiyakuyithanda.
• Andiyikuhlala ehlabathini lomntu xa ndiba ngumfazi kuwo.
• Abantu babe nomkhwa wokujonga kum njengokuba ndiyinto ethile yesibuko endaweni yomntu. Abazange bandibone, babone iingcamango zabo zobuqhetseba, ngoko babemhlophe-bazingca ngokwabo ngokuthi ndiyinto engcolileyo.
• Andiyazi ukuba ngubani owakhiwe izithende eziphezulu, kodwa bonke abafazi banomvuzo omkhulu.
• Kwintatheli: Nceda ungenze ihlaya. Ukuphelisa udliwano-ndlebe kunye noko ndikukholelwayo. Andiyi kukwenza amahlaya, kodwa andifuni ukubonakala ngathi.
• Udumo lufana ne caviar, uyazi-kuhle ukuba ne caviar kodwa kungekhona xa unayo yonke isidlo.
• Ukuba udumo luhamba, kudala, ndikunye, udumo. Ukuba iyahamba, ndihlala ndiyazi ukuba yinto eqhelekileyo. Ngoko ubuncinane into endiyifumanayo, kodwa akusikho apho ndihlala khona.
• Ukukhuthaza umona, udumo olusebenzayo.
• Ukubona igama lakho kwiphepha eliphambili lephepha njengokuba unomnye uhlobo lwengozi enkulu okanye ibhola le-gun lihlala liphazamisekile. Kungakhathaliseki ukuba uyayibona kaninzi kangakanani ukuba awukwazi ukuyifumana. Uqhubeka ucinga- "Kungoku kum. Ihlabathi lonke lifunda malunga nam, mhlawumbi ihlabathi.
• Ndiye kwikhalenda, kodwa ngeyakho ngexesha.
• Ndihlala ngethuba lokuqokwa kwamanye amaxesha, ngeeyure ezimbini. Ndizame ukutshintsha iindlela zam kodwa izinto ezenza ndiphule ngamandla, kwaye ziyamkholisa.
• Ndiyabuyisela xa ndedwa.
• Loo nto uyenzayo. Kungakhathaliseki ukuba yintoni, uya kuhlaziya ngamanye amaxesha, inyaniso yendalo yonke. Kodwa inxalenye elungileyo ufumana isigqibo sokuba uya kudibanisa njani.
• Abantu bayakuhlonela ngenxa yokuba banomuva usaphila kumaxesha amanzima kwaye wanyamezela, kwaye nangona uye waba udumo, awuzange ube yinto embi.
• Into eyona nto eyenzekayo kubantu xa begqoka kwaye beya kwindibano kukuba bayashiya yabo ngokwenene ekhaya. Bafana nabantu besiteji badlala nomnye umntu. Zidlala ukuba zibalulekile, kwaye zifuna ukuba uhlangabezane nokubaluleka kwazo, kungekhona.
• Inyaniso andizange ndikhohlise nabani na. Ndiyeke abantu bazikhohlise. Abazange bakhathazeke ngokufumanisa ukuba ngubani na ukuba ndiphi.
• Ukudala kufuneka kuqalwe ngobuntu kwaye xa usisomntu, uvakalelwa kukuba unobandezeleka.
• Ndingumntu ochasene nombutho. Indlela eyona mntu yi-underdog, kwaye nazo zonke izinto i-corporation ebenzela yona umntu uphuma ekhanda entloko.
Umculi ayikho. Kubuhlungu ngokwenene.
• [malunga nokufunda i-Rilke's Letters kwi-Poet Young ] Andizange ndixelelwe ukuba ndifundani, kwaye akukho mntu wandinike into yokufunda. Uyazi - indlela ekhona iincwadi ezithile umntu wonke afunda ngazo xa bekhula? . . . Ngoko into endiyenzayo - ngobusuku xa ndingenanto into endiyenzayo ndiya kwi-bookstock yasePikkwick e-Hollywood Boulevard. Kwaye ndivula nje iincwadi ngokungaqhelekanga-okanye xa ndifika kwiphepha okanye umhlathi endiyithandayo, ndithenga loo ncwadi. Ngoko ngobusuku bokugqibela ndithenge lo. Ngaba oku kuphosakeleyo?
• U-Arthur Miller akazange anditshatile ukuba andizange ndibe ngumntu osisimungulu.
Malunga nobuntwana bakhe
• Ndafunda nokuba indlela efanelekileyo yokugcina ingxaki yayingaze ikhononde okanye ifune into.
• Eyeshumi elinambini ndibukeka ngathi intombazana enesixhenxe. Umzimba wam waveliswa kwaye wenziwa.
Kodwa akukho mntu wayazi oku kodwa mna. Ndisembethe ingubo eluhlaza okwesibhakabhaka kunye ne-blouse yinkedama enikezelweyo. Bandenza ndibukeke njenge-lummox ebanzi.
• (malunga noNorma uJean, ubuntwaneni bakhe bodwa) Ngempumelelo yonke indijikelezile, ndiyakwazi ukuziva amehlo akhe enkwanthileyo akhangele kum. Uhlala ethi, "Andizange ndiphile, ndandingathandwanga," kwaye ndihlala ndididekile kwaye ndicinga ukuba mna ndiyithetha.
• Ndibukele ubuso bomphulaphuli xa umfundisi ekhalela ukuba uThixo wayebathande kangakanani kwaye bafuna kangakanani ukuzimisela kakuhle kuThixo. Babenobuso ngaphandle kokuphikisana nabo, ubuso obukhathele bokuba bevuya ukuva umntu owamthanda.
I-Quily Marilyn Monroe kwi-Love, Marriage, Sex
Iingcaphuno malunga nothando nomtshato kunye nesondo ukusuka ku- Marilyn Monroe , inkwenkwezi ye-movie ibaluleke kakhulu kuma-1950:
• Ndineenkwenkwezi ezininzi zokuba ngumfazi wendlu .... Ndicinga ukuba ndiyindalo.
• Kungcono ukuba ungonwabi wedwa kunokungahlali ujabule nomntu.
• Umsebenzi uyinto emangalisayo, kodwa awukwazi ukuwukhupha ubusuku obubandayo.
• Intombazana ehlakaniphileyo iyakanga kodwa ayithandi, iphulaphula kodwa ayikholelwa, kwaye ishiya phambi kokuba ihlale.
• Awazi na ukuba umntu ocebile unjengentombazana enhle? Awuyi kutshata intombazana nje ngokuba ihle, kodwa ubuhle bam, akuncedi? [ ngomlingiswa njengoLorelei Lee kwiGentlemen Prefer Blondes]
• Yintoni enhle ukuba nguMarilyn Monroe? Kutheni ndikwazi ukuba nje ngumfazi oqhelekileyo? Ibhinqa enokuthi ibe nosapho ... Ndiza kuhlala kumntwana omnye. Wam umntwana.
• Umzimba uhloselwe ukubonwa, kungekhona yonke into ehlanganisiweyo.
• Ukwabelana ngesondo luyinxalenye yendalo. Ndihamba kunye nendalo.
• Ukuba ngumfuziselo wesondo ngumthwalo onzima wokuthwala, ingakumbi xa ukhathele, utyhafile kwaye udibene.
• Akuyinyaniso ukuba andinanto, ndandinomathotholo.
• Ukuba ndiyidlala intombazana kwaye ndibuze umbuzo osisidenge, kufuneka ndilandele. Yintoni endiyifanele ndiyenze - jongene nohlakaniphile?
• Yiyo ingxaki, uphawu lwezesondo luba yinto. Kodwa ukuba ndiza kuba ngumqondiso wento ethile, ndingathanda ukulala ngesinye kunezinye izinto esinemifanekiso.
• Wonke umntu uhleka nje kum. Ndiyayonyanya. Amabele amakhulu, imbongolo enkulu, into enkulu. Andikwazi ukuba nayiphi into? Gee, ungahlala ixesha elide kangakanani?
• Ngaphambi komtshato, intombazana kufuneka yenze uthando kumntu ukuba amthinte. Emva komtshato, umele amphathe ukuba amthande.
• Uluntu alukhumbuli abantu abahlala ndawonye ngaphandle kokutshata, ukubonelela ukuba bangayithandi.
• Amadoda amaninzi ayigweba ukubaluleka kwakho ebomini babo ngokuthi unokubachaphazela kangakanani, kungekhona ngendlela onokuyenza ngayo.
• Amadoda ahlala ekulungele ukuhlonipha nantoni na eyabethayo.
• [H] amabhinqa ayenzi kakuhle njengabathandi xa bethengisa abafazi babo.
• Ndiqaphele ... ukuba amadoda ahlala eshiya abafazi abatshatileyo bodwa, kwaye bathambekele ekuphatheni bonke abafazi ngokuhlonela. Le nto ayikho inkokhelo enkulu kubasetyhini abasetyhini. Amadoda ahlala ekulungele ukuhlonipha nantoni na eyabethayo.
• Umthandi wangempela ngumntu onokumangalisa ngokubanga ebunzini lakho okanye ukumomotheka emehlweni akho okanye ukukhangela kwiindawo.
• Abafazi banomkhwa wokuhamba njengama-alamu xa bebona amadoda abo ethetha nam.
• Umoya wesifazana kunye nomoya omntu kufuneka avuselele ukwenzela ukuba enze isondo esithakazelisayo. Umthandi wangempela ngumntu onokukuvuyisa ngokuthinta intloko yakho okanye ukumomotheka kwamehlo akho okanye ukukhangela kwi-space.
• Amadoda acinga ukuba izinto ezithandwayo zothando zamabhinqa zanciphisa uthando lwakhe kubo ngokuqhelekileyo ziyathahla kwaye zibuthathaka. Ibhinqa linokuvelisa uthando olutsha kumntu ngamnye amthandayo, ukubonelela ukuba akukho maninzi.
• Njengoko ndiyakwazi ukwenza, ubuhlobo babasetyhini kunye nomnye busekelwe ekugqibeleni kwamanga kunye neentetho ezintle ezingathethi nto. Ucinga ukuba zizonke iingcuka ezizama ukukhathana ngendlela edibanisa ngayo kunye nokudlala ngothando xa behlangene.
• (malunga neminyaka yakhe yobutsha) Abamangalisayo bonke bathi into efanayo ngeendlela ezahlukeneyo. Kwakuyiphutha lam, befuna ukumanga nokundibamba.
• Umtshato wokuqala owawuphumelele kum ukunyusa ukungabikho komdla kwisondo .... Empeleni umtshato wethu wawuhlobo lobuhlobo kunye namalungelo ezesondo.
• Kungcono ukuba ihlabathi lonke likwazi wena, njengenkwenkwezi yesondo, kunokungaziwa nakuyo yonke into.
I-Quily Marilyn Monroe kwi-Acting ne-Hollywood
U-Marilyn Monroe wayesazi kakuhle impembelelo enamandla ebantwini nje kuba khona kwakhe, kodwa wayenqwenela ukubonwa njengomdlali onamandla kwaye onet talente, esebenza nzima ekusebenzeni kwakhe.
• Xa unephupha elilodwa kuphela kunokwenzeka ukuba lizaliseke - kuba uqhubeka usebenza kuyo ngaphandle kokuxutywa.
• Ukuba ndiyigcina yonke imithetho, andizange ndibe khona.
• Yonke yenza ukukholwa, akunjalo?
• Ndiyakuthanda ukwenza izinto azinqunywanga ngabacensors.
• Ndizama ukubonisa ukuba mna ndingumntu. Emva koko mhlawumbi ndiza kuziqinisekisa ukuba ndingu-actress.
• Umsebenzi uyazalwa kwiitalente zentlalo.
• I-Hollywood yindawo apho baya kukuhlawula iwaka leedola ngokubanga kunye neentente ezingamashumi amahlanu emphefumlweni wakho.
• Kwiifoto ezingenanto: Ngokuqinisekileyo ndazibuza. Ndiyifuna imali.
• Umdlali we-actress akayena umatshini, kodwa bakuphatha njengomshini. Umshini wemali.
• Umdlali ongeyena umatshini, kungakhathaliseki ukuba bafuna ukuthini ukuba ungubani. Ubudalwa kufuneka buqale ngobuntu kwaye xa uyingumuntu, uziva, uhlupheka.
• KwiHollywood intle intombazana ibaluleke kakhulu kunokuba iswele. Ugwetywa ngendlela obukeka ngayo, kungekhona oko ukhona. I-Hollywood iyindawo apho baya kukuhlawula iwaka leedola ngokubanga, kunye neentente ezingamashumi amahlanu emphefumlweni wakho. Ndiyazi, ngenxa yokuba ndiyinqumle isibonelelo sokuqala esoloko ngokwaneleyo kwaye iqhutyelwe amahlanu.
• Andifuni ukwenza imali. Ndifuna nje ukuba mhle.
• Umsebenzi wam ngumhlaba kuphela owake wade ndimele ndimi. Ndibonakala ngathi sinomhlaba wonke ongenaso isiseko-kodwa ndisebenza kwisiseko.
• Ndifuna ukuba ngumculi, kungekhona i-freek erotic. Andifuni ukuthengiswa kuluntu njenge-celluloid aphrodisical.
• Ukusebenza akuyona into oyenzayo. Endaweni yokwenza oko, kwenzeka. Ukuba uya kuqala ngelogiki, unakho ukuyeka. Unokuzilungiselela, kodwa uneziphumo ezingenasiphumo.
• Ndisoloko ndivakalelwa kwimeko engumncinci, nangona oko kwakufuneka ndiyenze kwimeko kwakuza kungena kwaye ndithi, "Sawubona," ukuba abantu bafanele bafumane imali yabo kwaye ukuba yiyo imbopheleleko yam , ukuwanika okusemgangathweni onokufumana kum.
• Le shishini kufuneka liziphatha njengomama onomntwana osanda kuphuma phambi kweemoto. Kodwa endaweni yokubethela umntwana kubo, baqala ukujezisa umntwana. Njengoko unganqindi ukufumana ubanda. Ngaba unomdla wokufumana ubanda! Ndiyathetha ukuba, abaphathi bangabanda kwaye bahlale ekhaya ngonaphakade baze bafowuncede, kodwa banokukukhathaza njani, umdlali weqonga, unobanda okanye intsholongwane. Uyazi, akukho mntu uziva ngakumbi kunokuba ugula. Ngamanye amaxesha ndinqwenela, gee, ndiyathanda ukuba bafanele benze i-comedy kunye nobushushu kunye nosulelo lwentsholongwane.
• Ekugqibeleni ndenza ingqondo yam ndifuna ukuba ngumdlali we-actress kwaye andiyi kuvumela ukungabi nantembelo kwonakalisa amathuba am.
• Iingcamango zam zangekho nantoni na endiyenzayo ngokuba ngumdlali omhle. Ndazi ukuba isantya sesithathu ndingaba njani. Ndinokuziva ndikunqongophala kweetalente, njengokungathi iingubo ezinqabileyo endizimbethe ngaphakathi. Kodwa, Thixo wam, ukuba ndifuna ukufunda, kutshintsha, ukuphucula!
• Abanye abantu baye babenomusa. Ukuba ndithi ndifuna ukukhula njengomdlali we-actress, bajonge umbala wam. Ukuba ndithi ndifuna ukuhlakulela, ukufunda i-craft yami, bahleka. Ngandlela-thile abayilindele ukuba ndibe nomngcipheko ngomsebenzi wam.
• Ndihlala ndithule emzimbeni iiyure ukuphulaphule iifoto zamabhayisikobho zijika zibe ngabantu abancinci nabancinci.
• Njengomfundi kaMichael (Chekhov), ndafunda okungakumbi malunga nokusebenza. Ndafunda i-psychology, imbali kunye neendlela ezifanelekileyo zobugcisa - ukunambitha.
• Ukusebenza kubalulekile. Yaba yinto yobugcisa eyayingumdlali, kungekhona kumlawuli okanye umlimi, okanye indoda leyo eyayithenge i studio. Kwakubugcisa obukuguqula umntu omnye, okwandisa ubomi bakho nengqondo. Ndandisoloko ndithanda ukuwenza kwaye ndazama nzima ukulifunda. Kodwa uMichael Chekhov, owayebambile waba ngumsebenzi kum. Kwaba uhlobo lwenkolo.
• Udliwano-ndlebe ngo-1956 malunga nobuntwana bakhe: Ukujonga emva, ndicinga ukuba ndandidla ukudlala-senze konke ixesha. Enye into, kwakuthetha ukuba ndihlala kwihlabathi elithandekayo kunalowo ojikelezile.
• Ndizama ukuzifumana njengomntu, ngamanye amaxesha akulula ukwenza. Izigidi zabantu zihlala ubomi babo bonke ngaphandle kokuzifumana. Kodwa into endimele ndiyenze. Indlela engcono kakhulu yokuba ndizenzele njengomntu kukuzibonakalisa ukuba mna ngumdlali wokudlala.
Iingcaphuno malunga noMarilyn Monroe
UMarilyn Monroe uye wabetha ezininzi. Nazi izinto abantu abambalwa abaye bathetha ngokuphathelele uMarilyn Monroe:
• NgoMarilyn Monroe, ngumyeni wakhe owayesakuba ngumyeni, uArthur Miller : Ukuze aphile, kwakufuneka abe ngumngcipheko okanye ayenze ngakumbi kunokuba abekhona. Kunoko, wayeyindlovu ekhoneni lezitalato ezama ukubuyela kwisihlwele sithatha iingubo zakhe.
• UBilly Wilder: Ukukhanya kobuso! Akuzange kubekho umfazi onaloo mandla kwiskrini, ngaphandle kweGarbo.
• I- Groucho Marx: Yimangalisa. UnguWest West , iTheda Bara kunye neBo Peep zonke zifakwa kwelinye.
• I- Shelley Winters: Ukuba wayedlala, wayebe novuyo.
• UFrank Sinatry, kuthiwa: Vala, uNorma uJean. Uyisithakazelo awukwazi oko uthethayo.
• USimone Signoret, watshata noYves Montand: Ukuba uMarilyn uyamthanda nomyeni wam uqinisekisa ukuba unomdla, kuba ndiyamthanda naye.
• URonald Reagan, kwi-White House Briefing malunga nokulungiswa kweerhafu, ngoMeyi 22, 1986: Ndimele ndivume ukuba kukho amaxesha kule nkqubo, njengoko ukulungiswa kweerhafu kwandlela indlela ngezinye iinkqubo zengqungquthela yeCongress, ukuba nokuba ndandithandabuza. Ndixelele iqela lokugqibela ebusuku ukuba kwakunjengokufana nexesha elithile uMarilyn Monroe, u-Marilyn Monroe osemva, wadibana no-Albert Einstein. Kwaye uMarilyn wambamba ngengalo waza wathi, "Masitshatile." Kwaye u-Einstein wamjonga waza waphendula wathi, "Kodwa, ntanda, kuthini ukuba abantwana bethu babenokubukeka kwam kunye nobuchopho bakho?"
• Umgxeki wefilimu UPauline Kael: Umxube wakhe wokumangalisa amehlo kunye nokuxhatshazwa kwezidakamizwa kwakubonakala kufikelela kuyo yonke into yindoda; wavula amadoda angqingili. Kwaye abafazi babengazange bamthathe ngokungqongqo ukuba bacaphuke; wayeyinto ehlekisayo kunye nengqiqo ngendlela eyenza abantu bazive bekhuselekile. Wayengumncinci omncinci; Ubuso bakhe bubukeka ngathi, xa kungekho mntu wayengqalelo kuye, yayiya kupheleka - njengokungathi wafa phakathi kweefowuni.
• Ubomi be-Louis Banner: Ungumntwana kuthi sonke, umntwana esifuna ukulibala kodwa akakwazi ukugxotha. Sifuna ukwazi ukuba kwenzekani kuye ukuba wayephila ixesha elide.
• u- Gloria Steinem wezobuchwephesha: Ndimkhumbula ekhrinini , enkulu njengodonsi we-colossus, ukumbumba kunye nokuhlekisana nokuthemba nje indlela eya ekungciphekweni.
• Umfundi wezobugcisa uGloria Steinem: Umfundi, igqwetha, utitshala, umculi, umama, ugogo, umkhuseli wezilwanyana, umcengceli, umenzi wendlu, umncedisi wezemidlalo, umhlanguli wabantwana - zonke ezi zizayo singacinga ngoNorma Jeane. . . . Omnye unokucinga nomfazi osemzini oseNorma Jeane noMarilyn ukuba abe ngumdlali oqinileyo kunye no-comedienne ohlakaniphileyo oya kuhlala esebenza kwiminyaka engamashumi amathandathu ubudala, eneemveliso ezizayo.
• Ukususela kwi-eulogy nguLee Strasberg: Wayenomgangatho oqaqambileyo-inhlanganisela yokubambisana, ukukhawuleza, ukulangazelela, okwammiselayo kwaye okwenza wonke umntu anqwenele ukuba yinxalenye yalo, ukuba ahlanganyele kwi-naïvete engumntwana okwakunjalo kanye neentloni kodwa kunjalo.
• Kwavela ku-Lee Strasberg eulogy: U- Marilyn Monroe wayengummangalisa. Ebudeni bakhe bomi wadala inkolelo yokuba intombazana ehlwempuzekileyo evela kwimvelaphi engabikho. Ilizwe lonke waba ngumqondiso wesifazana esingunaphakade.
Iingcaphulo ezingakumbi zabafazi:
U B U C A U M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A M A
Imfazwe Yehlabathi I: Jikelele uJohn J. Pershing
Biography kaMary Sibley
Quotes Marylet Follett
Ixesha elide elide eliqhelekileyo ngesiTaliyane
Ukuguqulwa kweMerika: iMfazwe yaseLong Island
Igalari zeTekethi zezilwanyana: Insect / Arachnids
Umfutshane omfutshane wokuwa koBukumkani baseRoma
Igosa lika-El Dorado
Iimfazwe zeMpi yaseMerika zaseSpain
Yintoni Eyona Ngqineli Yomfazi?
Uhlobo luni lwebhokisi lombhobho Ngaba kufuneka ugqoke?
Iindlela ezahlukileyo zokuSebenzisana zisebenza njani kwi-Sociology
Funda Isigama esichaphazelekayo malunga nendlela yokutya kunye nokulungiselela ukutya
Iifrentshi zesiFrentshi nge Quelque
Indlela abafuduki base-Ireland abaye banqoba ngayo ukungcwaba eMelika
Lysander ukusuka kwi-Dream Night Midsummer Dreaming-Character Analysis
Amaphephancwadi aphezulu kwiGenesalogy for Family History
Fumana Iinkqubo zokuFunda zasehlobo
I-Carbonemys kunye neTitanoboa - Ngubani Owunikelayo?
Iphrofayili kaStanley Woodard, iNjini yeAerospace Engineer